Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 07/06/2020)
Iyada oo qaar ka mid ah tareenada oo ugu dhaqsiyaha badan Yurub wadooyinka muuqaal dabiici ah, Safrida The Harooyinka ugu quruxda badan ee Northern Italy tareen waa dhaqaale, raaxo iyo si toos ah, bixiya fikrad nolosha degaanka, inta badan la views weyn tuuraa gorgortan ah.
Iyada oo qayb ka ah bixio wadada-qorshaynta oo dabacsan a jadwalka, aad si sahal ah u wada gabal kartaa faahfaahin ah ka dhigi doonaa safarka sida cajiib ah sida caga.
Markaas dabcan, waxaa jira labada magaalo ee caanka ah ee Milan iyo Venice in la ogaado in ay North of Italy! i aamini marka waxaan idinku leeyahay, booqde kasta ka heli doontaa wax in aan halkan ku jeclahay.
Lake Garda waa mid ka mid ah Harooyinka ugu weyn ee Northern Italy iyo ugu weyn ee u gudubno, glacial ee Italy shan harooyinka, quudiyo ee Alps ee waqooyiga. North of Verona, Lake Garda waa qoyska ugu – iyo biyo sports-oriented harooyinka Italy. Waxa kale oo Italy u gudubno ugu weyn, ka imaanaya magalaada Alpine uga yaacday ilaa cidhifka Waqooyi ee Valley Po ah.
news xataa si fiican. goobta Lake Garda waxay siinaysaa cimilada qoraxda sanadka oo dhan meesha iyo Saytuun, iyo liin si fiican u koraan woqooyi ee ay kala duwan sida caadiga ah. Perfect qaar ka mid ah galabtii G&T! Ku dar bacaadka dheer xeebaha iyo xajin ah magaalo views promenades harada. Waxaad adigu iskaa u helay kaamilka ah fasaxa caga!
Haddaba sidee baad aad dareento sida samaynaya socday si aad u aragto qaar ka mid ah Lakes ee Northern Italy? Ma doonaysaa in la badbaadiyo waqti iyo lacag halka Safrida Northern Italy by tareenka? Jartaan oo dhan tigidhada tareenka adiga oo isticmaalaya Save A tareenka in daqiiqo, oo aan ajuurada qarsoon!